Xarunta Maskax-maal oo shahaado sharaf gudoon siisay Wasiirka Madaxtooyada iyo sadex xubnood oo kale | Somaliland.Org
Xarunta Maskax-maal oo shahaado sharaf gudoon siisay Wasiirka Madaxtooyada iyo sadex xubnood oo kale
August 31, 2012	“Waxa dhagahayga ka badatay waxba ma qaban xukuumadu, hadiise ay Boorame garteen….”
“Waxaan Leeyahay waxaan soo degayaa Boorame”
Boorame (Somaliland.Org)- Xarunta akhriska buugaagta ee Maskax maal ee fadhigeedu yahay magaaladda Boorame, ayaa xalay shahaado sharaf gudoon siiyay Wasiirka Madaxtooyadda Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay u aqoonsadeen Wasiirka sanadka 2012-ka. Waxa kale oo shahaadooyin noocan oo kale ah guddoon siiyeen aqoon-yahano kale oo ay majeerteen waxqabadkooda.
Xafladii loo sameeyay shahaado gudoon siinta Wasiirka iyo xubnaha kale oo lagu qabtay Hoteelka RAYS ee Magaalada Boorame ayaa barnaamijkaasi loogu magac-daray “Qadari Qofkaaga Qiimaha Leh”, Waxaana lagu marti qaaday Wasiirka Madaxtooyada ee Somaliland Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan, Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Prof. Saleebaan Axmed Guuleed iyo Dr. Hodan Jaamac Cabdi.
Madashan ayaa waxa ugu horayntii ka hadlay Prof. Axmed Cabdi Ismaaciil oo ku hadlayay magaca Maskaxmaal, waxana uu ka sheekeeyay madashan iyo waxa ay ujeedooyinka barnaamijkan, waxaanu yidhi “Waa barnaamij ka mid ah kuwii caadiga ahaa ee Maskaxmaal, waxana nagu saa’id ah Martisharaftan afarta ah, waxaan ku soo mart-iqaadnay barnaamijkan oo ay Madasha Maskaxmaal u Qorshaysay inay noqdaan kuwo ay gudoonsiiso shahadooyin sharaf muhiim ah oo noqday kuwii ugu horeeyay ee aan bixino.”
Prof. Axmed oo hadalka sii wata ayaa waxa uu yidhi “Afartan qof laba qofba waa dhinac, ugu horayn, Prof. Saleebaan iyo Abwaan Hadraawi, waxaan ku dooranay kaalinta ay bulshada kaga jiraan iyo sida ay u noqdeen kuwo ka tagay wax dhaxal gal ah oo kala ah, Suugaanta iyo Aqoonta, dhinaca kale wax aan Wasiir Xirsi iyo Dr. Hodan ku dooranay kaalinta shaqsi ee ay kaga jiraan bulshada iyada oo laga duulayo wax-walba oo u qabsoomay shaqsi ahaan.”
Prof. Axmed waxa kale oo uu sheegay in shahaadadan oo noqon doonta mid sanad walba la bixiyo, loogu talo galay in qofba bulshada ka dhex muuqda halkiisa lagu dhiiri galiyo iyada oo aan laga gabanayn in la sheego waxqabadkiisa shaqsi ama bulsho.
“Waxa aan Maskaxmaal ahaan qorshaysanay in aan mustaqbalka u gogol xaadhno sidii bulshadada shaqsiyaadka waxtarka u leh loo sameeyo taalooyin dhaxalka dambe ku biirta,”ayuu yidhi Prof. Axmed.
Xafladaasi ayaa waxa lagu daawaday film kooban oo socday muddo 12 daqiiqo ah isla markaana soo bandhigayay taariikhda afartan marti-sharaf oo aad u koobnaa, filimkan ayaa waxaa uu ahaa mid soo jiitay dhamaan dadwaynaha ka soo qayb galay kaasi oo dadbadan dib u xasuusiyay taariikhda dheer ay ay shaqsiyaadkan qaar ka mid ahi leeyihiin.
Madashan ayaa wax hadalka lagu soo dhaweeyay afarta qof ee la gudoonsiinayay shahaado sharafta, waxana ay halkaasi si isbarbar dhig ah u dhex mushaaxeen waayo aragnimooyinkooga iyo waayahii ay u soo joogeen ee ay aqoonta u leeyihiin
Prof. Saleebaan Axmedd Guuleed: oo hadalka bilaabay ayaa ku dheeraaday waayaha tacliinta iyo sida ay muhiimka u tahay, waxa na uu ku dardaarmay dhaqanka in la beero oo la tarmiyo, arintaasi oo ah ayuu yidhi mid u taala da’yarta manta ee ay hormuudka u yihiin Bahda Maskaxmaal.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Mudane Xirsi X. Cali oo isaaguna ka hadlay madashan ayaa waxa uu sheegay in ay la tahay wax cajiib ah in Maskaxmaal ay muujiso waxqabdkiisa waxana uu yidhi “Hargaysa waxa dhagahayga ka badatay waxba ma qaban xukuumadu hadiise ay maanta Maskaxmaal iyo Boorame garteen tani waa mid aan aad ugu faraxsanahay.waanan idiinka mahad celinayaa.”
“Waxaan leeyahay Boorame ayaan u soo guurayaa,”ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyaddu waqxaanu ku dardaarmay in xooga la saaro barashada cilmiga iyo ka qayb qadashada horumarka Bulshada.
Dr. Hodan oo iyaduna ka hadashay halkaasi ayaa waxa ay ka sheekaysay waayaheedii tacliinta, waxana ay si gaar ah ugu mahad naqday saygeeda oo ay sheegtay inuu garab ku siiyay inay waxbarati mudadaas ay waxbarashada wadayna ay dhasho 6 caruur ah oo habeenkan barbar joogay, waxa kale oo ay ka mahadnaqday Abaalmarintan la siiyay.
Abwaan Hadraawi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay dhoola tus dhinaca hal abuurka ah, waxana uu mariyay maanso door ah oo uu kaga sheekeeyay ahmiyada halabuurka leeyahay.
Abwaan Hadraawi isaga oo la dardaarmaya Madasha Maskaxmaal waxa uu halhaws ka dhigtay Magaca Maskaxmaal waxana uu tusaaleeyay wax badan, waxa uu yidhi “ Dhalinyarooy magaasi waa mid culus ee sidiisa u garta, caalamka iyo gayigeenana ka dhiga mid maskaxda maala, fidiya oo fikirka Maskaxmaal ha u gudbo caalamka iyo magaalooyinka waawayn, hadii intaasi aad samaysaan Ifku waa idiin markhaati, Aakhirana waa idiin abaal marin.”
Gabagabadii waxa aan ka marag kacayaa inaad guul joogtaan oo ay astaan u tahay kaalinta aad kaga jirtaan bulshada, eebe waxaaan idiinka baryayaa inaydaan niyad jabin oo aad noqotaan kuwo aan ka noqon hiigsiga iyo himilada hadii ay wax adagi idin xayn daabaan.”
Maayayarka Boorame Mud. Cabdiraxmaan Shide Bile oo ka hadlay Madasha ayaa waxa uu amaan huwiyay madasha akhriska ee Maskaxmaal, waxana uu sheegay inuu ka marag kacayo inay hormar ku soo kordhiyeen magaalda, waxa uu ku kaftamay maayarku inuu yahay isaguba dhalinyaro isla markaana uu jecelyahay dhalinta waxqabadkeeda, isaga oo hadlaya waxa uu yidhi “ Waxa ay aduunyadu ku hormartay maskaxda dhalinta, aniguna waqtigii aan soo galay siyaasada waxa aan ahaa dhalinyaro.
Maayarku waxa uu u mahad naqay Masuuliyiinta isla markaan waxa uu soo dhaweeyay masuuliyiinta.
Badhasaabka Awdal Axmed Xadi Sidci oo madashan ka hadlay ayaa waxa uu xusay in madasha caawa ay fadhiyaan dad mudan in lagu daydo, waxaan auu u mahadnaqay madasha soo qabanqaabisay ee Maskaxmaal, waxa uu Badhasaabku sheegay in loo baahan yahay in la taageero maskaxmaal si ay u hormarto oo looga faaiidaysto, waxa uu u mahadnaqay badhasaabku Masuuliyiinta ka qayb gashay Madasha.
Madashan ayaa waxa gabagabadii halkai lagu gudoonsiiyay abaal marin shahaado sharaf ah masuuliyiinta Afarta ah ee masdashan ku casuunaa.
Previous PostDegmada Laas-qoray oo si weyn loogu soo dhaweeyay Masuuliyiinta cusub ee degmadaasiNext PostSidee ayuu u dhaqan geli Go’aankii xukuumaddu ka qaadatay xiliga kala guurka G/ deegaanka?	Blog